Paul Pogba oo ka jawaabay wararka sheegayay inuu ka fariisanayo u ciyaarista xulka qaranka France – Gool FM
(Manchester) 26 Okt 2020. Xiddiga khadka dhexe kaga ciyaara kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayaa ka jawaabay wararka sheegayay saacadihii la soo dhaafay inuu go’aansaday inuu ka fariisto ciyaaraha caalamiga.
Wargeyska “AS” ee dalka England ayaa soo wariyay in Pogba uu go’aansaday inuusan markale ku ciyaarin maaliyada xulka qaranka France, kaddib markii wadaxweynaha dalkaas ee Emmanuel Macron uu Islaamka ku tilmaamay argagaxisada caalamiga ah.
Paul Pogba ayaa fariin uu ku daabacay boggiisa rasmiga ah ee baraha bulshada ku xiriirta, wuxuu ku beeniyay wararka sheegayay inuu go’aansaday inuu ka fariisto ciyaaraha caalamiga.
“The Sun ayaa mar kale sameyneysa. Dabcan, warkaan gabi ahaanba waa mid aan sal laheyn. Ma dhihin ama xitaa kuma fikirin inaan ka fariisanayo u ciyaarista xulka qaranka France”.
“Waan ka xanaaqsanahay, kana naxay oo aan ka niyadjabay warbaahinta qaar ee magaceyga adeegsanaya si ay cinwaano ugu sameeyaan sheekada haatan ka taagan Faransiiska sidoo kale, waxayna sidoo kale arrinta qeyb kaga soo dhigeen xulka qaranka”.
“Waxaan ka soo horjeedaa dhammaan noocyada rabshadaha iyo argagixisanimada, nasiib darrose wargeysyada qaar uma dhaqmaan si masuu’liyad leh marka ay qorayaan wararka, waxayna ku xadgudbayaan xorriyadda saxaafadda, iyagoo aan xaqiijinin sax ahaanshiyaha waxa ay qoroyaan, isla markaana abuuraya warar been abuur ah, oo aysan garaneynin saameynta ay ku yeelan doonto nolosha shaqsiyadeed ee aniga iyo dadka”.
“Waxaan qaadi doonaa tallaabooyin dhanka sharciga ee ka dhan ah kuwa daabacay iyo cid kasta oo gacan ka geysatay faafinta wararkan beenta ah, ceeb ayey idinku tahay”.